Naya Bikalpa | नेकपा एमालेको निमन्त्रणामा स्वराजको भ्रमण भएको होइन - Naya Bikalpa नेकपा एमालेको निमन्त्रणामा स्वराजको भ्रमण भएको होइन - Naya Bikalpa
नेकपा एमालेको निमन्त्रणामा स्वराजको भ्रमण भएको होइन
प्रकाशित मिती: २०७४ माघ २२, ०८: ३४: ०१
प्रदिप ज्ञवाली, सचिव नेकपा एमाले
दुई दिने नेपाल भ्रमणमा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज बिहिबार नेपाल आइन् र शुक्रबारनै फर्किइन् । भ्रमणको क्रममा उनले नेपालका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सबै दलहरुलाई पालैपालो भेट गरीन् । विभिन्न चरणमा विभिन्न स्थानहरुमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा सबै दलहरुको आपसी हित र नेपाल भारतको सम्बन्ध सुमधुर गर्दै अघि बढ्ने औपचारीक कुरा भएको बताइएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको नयाँ संविधान अनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सफल भएकोमा नेपाल सरकार तथा राजनैतिक दल सबैलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरीन् । निर्वाचनमा वामगठनको बहुमत आएपछि भारतीय विदेश मन्त्रीको दुइदिने राजनैतिक भ्रमणलाई सबैतिरबाट अर्थपूर्ण रुपले हेरिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेश केन्द्रीत दलका शिर्ष नेता महन्त ठाकुरदेखी अन्य नेता हुँदै शुक्रबार अपरान्ह बालुवाटारमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म भएको छुट्टाछुट्टै भेटघाटले राजनैतिक क्षेत्रमा निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यिनै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर एमालेका सचिव तथा स्पष्ट वक्ता प्रदिप ज्ञवालीसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अशः
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच के–के कुरा भयो ?
मुख्यतया वार्ता दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ कसरी बलियो बनाउने, नयाँ युगको आवश्यकता अनुसार बहुआयामी कसरी बनाउने र विगतमा रहेका कतिपय असमझदारीहरुलाई हटाउँदै दुवै देशको हितमा अधिकतम केन्द्रीत कसरी हुने भन्ने बारेमा कुरा भयो । सुष्मा स्वराजले विशेषत नेपालले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको र स्थिरता र समृद्धिको विषयमा अगाढी बढेकोमा नेपाली जनतालाई र बहुमत प्राप्तीको हैसीयतको निम्ति नेकपा एमालेलाई बधाई दिनको निम्ति आएको कुरा बताउनुभयो । आगामी दिनमा नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक पनि भएको अध्यक्षसँगको वार्ताको क्रममा बताउनुभयो ।
नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध बेला–बेलामा चिसिने गरेको छ, यसबारे सुष्मा स्वराजले के भन्नुभयो त ?
उहाँले आगामी दिनहरुमा मिलेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ । यो भन्दा अगाढी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले पनि त्यो सन्देश दिसक्नु भएको थियो । यी सबै कुरा हेर्दा भारत चाँही विगतमा रहेका कतिपय कमीकमजोरीहरुलाई सच्याएर अगाढी बढ्न खोजेको संकेत देखिन्छ । विगतमा एकदमै सुक्ष्म व्यवस्थापन भएको र कहिले कसलाई नजिक ठान्ने कहिले कसलाई टाढा ठान्ने प्रवृति र नेपालका आन्तरिक मामलामा अनावश्यक चासो राख्ने जस्तो कुराहरुले एक खालको शंकाको स्थिति र असमझदारीको स्थिति सिर्जना भयो र नाकाबन्दी जस्तो एउटा अत्यन्त नाजुक स्थिति समेत सिर्जना भयो । यी सबै कुराहरुलाई पुनरावलोकन गर्दै नयाँ ढङ्गले अगाढी बढ्ने अहिले संकेत देखिन्छ । अब धेरै कुराहरु भोलीका दिनहरुमा व्यवहारमा हेर्नुपर्ला तर समग्रमा उहाँहरु नयाँ ढङ्गले अगाढ्री बढ्न खोजेको उहाँहरुको अभिव्यक्ति र सन्देशले बताउँछ ।
नयाँ सरकारसँग निकट भएर काम गर्ने चाहना हालै बसेको बैठकमा प्रकट भएको हो ?
हो त्यस्तै देखिन्छ । यस्तो खण्डीत जनादेश अर्थात कसैको पनि बहुमत नआउने स्थितिले कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिलाई सहयोग गर्दैन । नेपाली जनताले स्पष्ट ढङ्गले अहिले जुन जनादेश दिएका छन्, स्थिरता र समृद्धिको विषयमा भारत त्यसबाट खुशी भएको र भारत अब नेपाल स्थिरता र समृद्धिको दिशामा अगाढी बढ्छ भन्ने कुरामा आशावादी छ विश्वस्त छ, त्यो दिशामा अगाढी बढ्नको निम्ति हरसम्भव सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँको भ्रमणको भित्री एजेण्डा चाँही के रहेछ त ?
उहाँकै शब्दमा भन्दाखेरी स्पष्ट रुपमा कुनै निर्धारीत एजेण्डा होइन, म चाँही सद्भाव बाँढ्न आएको हो भनेर भन्नुभएको थियो । एजेण्डा केही भएको भएर परराष्ट्रमन्त्रालयलाई थाहा होला अथवा वर्तमान सरकारलाई थाहा होला, जसले यो भ्रमणको व्यवस्थापन गरेको छ । हामीसँग कुरा गर्दाखेरी हामीलाई भन्नुभएको उहाँको भनाइहरु हेर्दाखेरी मुलतः नयाँ स्थिति बन्दै गरेको सन्दर्भमा नयाँ बन्ने सरकारसँग प्रारम्भदेखि नै समझदारी बनाएर अगाढी बढ्ने चाहना चाही प्रकट भएको हामीले पायौं ।
एजेण्डा सरकारलाई थाहा होला भन्नुभयो, तर ओलीले त एमालेको निमन्त्रणामा भ्रमण भएको भन्नुभयो नि ?
यो भ्रमण नेकपा एमालेले आमन्त्रण गरेर भएको होइन । उहाँ आफै आउनुभएको हो । हामीले हार्दिक स्वागत गरेका छौं उहाँलाई र नेकपा एमालेले आमन्त्रित ग¥यो भनेर बाहिर आएका समाचार चाही सहि होइनन् ।
त्यसो भए एमालेको पाहुना होइन सुष्मा स्वराज ?
उहाँ सबैको पाहुना हो । तर नेपाल सरकारले बोलाएको होला वा उहाँकै भनाई अनुसार भन्ने हो भनेदेखि कसैले बोलाई रहनु पर्ने कुनै एउटा बहाना खोजीरहनुपर्ने कुनै कारण नभएकोले भ्रमणमा आएको हो । हामी यति घनिष्ट छौं की दुई देशबीचको भ्रमणहरु आदानप्रदान भैरहन्छन् उहाले भन्नुभयो । नेकपा एमालेले निमन्त्रणा गरेर उहाँ आउनुभयो भन्ने चाँही होइन ।
त्यसो भए नेपाल सरकारकै निमन्त्रणामा आउनु भएको हो त ?
त्यो नेपाल सरकारलाई सोध्नुहोला । म नेपाल सरकारको प्रवक्ता होइन । बाहिरको चर्चालाई तपाई आधार नबनाउनुस् । जब म सँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्तासँग हुरा गर्दै हुनु हुन्छ भने नेकपा एमालेको बारेमा दृष्टिकोण बनाउँदाखेरी तपाईले नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको भनाईलाई आधिकारिक ठान्नुपर्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केपी शर्मा ओलीको बीचमा टेलीफोन वार्ता हुँदाखेरीनै स्वराजको भ्रमणबारे कुरा भएको बताइन्छ नि ?
त्यसो हो भने त भारत सरकारको इच्छामा नै भएको भन्नुप¥यो । स्वभाविक रुपले त्यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौं र नेपाल र भारत धेरै नजिकका छिमेकी मित्रहरु हुन् । नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएर ठूलो एउटा परिवर्तन भएको सङ्क्रमणकाल टुंगिएको अवस्थामा नयाँ आउने सरकारले जिम्मेवारी लिन तयार भइरहेको अवस्था भारतको विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई नौलो मान्नुपर्दैन । भोली सरकार बन्ने कुरा त स्पष्ट छ । त्यो स्थिति भित्र एउटा छिमेकी देशको हैसियतले भारतले नयाँ बन्न लागेको सरकारसँग छलफल गर्नु अस्वभाविक होइन । तर तपाईले जे भन्न खोज्दै हुनुुहुन्छ की नेकपा एमालेको रुचिमा चाँही यो भ्रमण भएको त्यो चाँही गलत कुरा हो ।
पछिल्लो समयमा ओली भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर जान चाहन्छ भन्ने देखियो नि ?
त्यो त कुनै नौलो कुरा भएन भारतसँग सम्बन्ध राख्नुमा ! छिमेकी मुलुक सिमाना जोडिएको मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर, सँगसँगै अगाढी बढ्न चाहनु राम्रो कुरा हो नि । यो असमझदारी नेकपा एमालेसँग गरिएको असमझदारी थिएन । खास गरी त्यतिबेला संविधान बन्दै गरेको बेला सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के थियो भन्दा यस नयाँ बिकल्प साप्ताहिक मार्फत जनताहरुलाई केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र हामी सबैले के बुझ्नु पर्छ भनेदेखि, संविधान निर्माण कुनै पनि देशको आन्तरिक र कुनैपनि देशका जनताको सार्वभौम निर्णयको कुराप्रति भारत त्यतिबेला चाँही सन्तुष्ट भएन अथवा भारतले त्यसलाई सरल ढङ्गबाट लिएन । भारतले आफ्नो इच्छा अनुकुलको संविधान बनाउन अथवा संविधानमा आफ्ना इच्छा अनुकुलका एजेण्डाहरु स्थापित गर्न खोज्यो जुन कुरालाई नेपालको राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गरेनन् । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दीको तहसम्म जाने एकदम कठोर कदम चाल्यो । त्यसकारण त्यो सम्बन्ध बिग्रेको नेकपा एमालेको कारणले होइन । हामीले नेपालको सार्वभौम जनताको अधिकारसँग त्यो अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको रुपमा लिनुपर्दछ । कुनै भारतका नेताहरुको या भारतका पार्टीहरुले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्न नसकेको एउटा स्थिति थियो । यी सबै घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर भारत मेलमिलापमा अगाढी बढ्न खाजेको देखिन्छ । तर कतिपय कुराहरु व्यवहारमा हेर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालको विकासमा भारतले सहयोग गर्न चाहेको हो भनेदेखी हामीले भोलीका दिनहरुमा हेर्नेछौं । नेपाली उत्पादकहरुले भारतीय बजारमा कति सहजता पाउँछन् । नेपालका समस्या उत्पन्न हुँदा भारत कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यो हेर्न सकिन्छ । नेपालको तर्फबाट जहिले पनि भारतसँग घनिष्टताको सम्बन्ध राख्न चाहेका छौं । आम्तीय सम्बन्ध राख्न चाहेका छौं । जम्माजम्मी नेपाली जनताले चाहेको कुरा नेकपा एमालेले पनि जनताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भन्ने कुरा एउटै हो नेपाल एउटा सार्वभौम देश हो ।
नेपाल आफ्ना आन्तरिक मामलाहरुलाई आफैं समाधान गर्न सक्षम छ । त्यसो भएको हुनाले नेपालका आन्तरिक मामलाहरुमा कुनै अनुचित चासो नराखीकन नेपाली जनताले जे फैसला गरेका छन्, त्यसमा भारतको टाउको दुखाई हुनुभएन । संविधान बनाउने मामलामा, सरकार बनाउने मामलामा त्यो फैसलालाई स्वीकार गर्दै सहकार्यका साथ अगाढी बढ्न सक्दा देशकै हितमा हुन्छ । दुईवटा देशहरु मिलेर सहकार्यका साथ अगाढी बढ्दा एकले अर्कालाई लाभ पु¥याउन सक्ने धेरै क्षेत्रहरु छन् । तर त्यसो हुन सकेन, असमझदारी रह्यो भने त्यसले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन, कसैले जित्दैन त्यसो भएको हुनाले दुइवटैले जित्नु भनेको दुईवटा देशको बीचमा जति घनिष्ट सम्बन्ध भयो त्यति नै दुइवटै देशको जनताको हितमा हुने हो । हामी त्यही चाहन्छौं ।
निर्वाचन अगाढी र निर्वाचन पछि एमालेले भारत सम्बन्धका बारेमा बोली फेरीयो भन्छन् नी सत्ता पाउने पक्का भएर हो ?
तपाईको भनाइप्रति म आपत्ति जनाउँछु । के नेपालको राष्ट्रियताको कुरा गर्नु भनेको भारत विरोधी हुनु हो ? तपाईले के बुझ्नु भएको छ राष्ट्रियता भनेको सबैभन्दा पहिले नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने कसरा हो । नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुले नेपालको हित नहेरेर कसको हित हेर्ने ? अरु देशको हित हेर्ने हो ? पहिले त तपाईको भनाइ नै एकदमै आपत्ति जनक भयो, दोस्रो, चुनाव जित्ने बितिक्कै भन्ने कुरा होइन हामी चुनाव भन्दा अगाढी पनि नाकाबन्दीको बेलामा पनि पटक पटक भन्दै आइ रहेका हौ की नेपाल भारत सम्बन्ध एउटा असल, सुमधुर र दूवै देशको हितमा होस् भन्ने चाहन्छौं । तर हामीले जम्माजम्मी भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि यो सम्बन्ध समानता माथी आधारित हुनुपर्छ । एक अर्काको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्ने स्वाभीमानलाई सम्मान गर्ने राष्ट्रिय स्वभिमानलाई सम्मान गर्ने एक अर्काको आन्तरिक मामलामा बाधा नगर्ने त्यो माथी आधारित हुनुपर्छ त्यो भनेका हौं । त्यसो भन्नु के त्यो गलत कुरा हो ? त्यसो भन्ने भारत विरोधी अथवा अरु कुनै देश विरोधी हुनु हो ? राष्ट्रियताको कुरा गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दाखेरी त्यसलाई राजनीतिक झलक दिन मिल्दैन । हामी हिजो चाहे प्रतिपक्षी हुँदा होस् चाहे सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गरेको अवस्थामा होस् जहाँ हुँदाखेरी पनि हाम्रा नीतिहरु सुसम्बत हाम्रा कन्सिस्टेन्सिहरु छन् । हामी सरकारमा हुँदा एउटा कुरा सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्दैनौं । हामीले जहिले पनि भारतसँग हाम्रा छिमेकीहरुसँग असल सम्बन्ध बनाउन चाहेको छौं । त्यो असल सम्बन्ध भनेको दुई देशको सार्वभौम समनता माथी आधारित हुन्छ ।
२०७४ माघ २२, ०८: ३४: ०१